Fitrandrahana gaboraraka: tandindomin-doza ny antsantsa | NewsMada
Fitrandrahana gaboraraka: tandindomin-doza ny antsantsa
Miisa 80 ny karazana antsantsa eto Madagasikara, ka ao anatin’ny « lisitra mena », mitanisa ireo tandindomin-doza sy ahina ho lany tamingana, navoakan’ny Fiombonambe iraisam-pirenena mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana ( IUCN), ny 37 amin’ireo. Anisan’izany ny antsantsa maritoa (Sphyrna mokarran) ny antsantsa léopard (Stegostoma fasciatum) ary ny antsantsa misy tendrony fotsy (Carcharhinus albimarginatus).
Tandindomin-doza ity hazandrano ity satria mirongatra ny fitrandrahana gaboraraka. Mihapotika ny toeram-ponenany sy ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetr’andro. Nahatratra 14 taonina ny vombon’antsantsa naondran’i Madagasikara, ny taona 2017.
Nankalazaina ny 12 jolay teo ny Andro ho fanentanana mikasika ny antsantsa (voatondro 14 jolay ny daty tena izy). Tanjona ny hanomezan-danja ity karazana hazan-dranomasina ity, hanamafisana ny fepetra hiarovana sy hitantanana azy maharitra. Voakasik’izany koa ny karazana ray (raie), karazan-trondro mitapelaka. Miara-miombon’antoka manatanteraka izany ny minisiteran’ny Tontolo iainana (MEDD), ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep), ary tohanan’ny fikambanana iraisam-pirenena Wildelife conservation society (WCS), hamolavola ity drafi-pirenena ity. Anisan’ny nanatrika ny tale jeneralin’ny Jono ao amin’ny Maep, Bemanaja Etienne. Nankatoavina ny jona 2019 teo ity drafi-pirenena ity.